के गर्यो प्राज्ञिक बैठकले ? – Sajha Bisaunee
के गर्यो प्राज्ञिक बैठकले ?
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक बैठक बुधवार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका प्राध्यापक र कर्मचारीको अवरोधका कारण ढिला गरी सुरु भएको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुका साथै विभिन्न प्रस्तावहरू समेत अनुमोदन गरेको छ ।
आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षक नियुक्तिका आधार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि प्रस्तावमा भने बैठकमा छलफल नभएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यो कार्यविधिमा प्राध्यापकहरूले असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो प्रस्तावामा भने प्राध्यापकहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । यसअघि यो प्रस्तावको विरोध गर्दै प्राध्यापकहरूले बैठकस्थलमा धर्ना दिएका थिए । तर साँझ प्राध्यापकहरूले बैठक सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेका थिए ।
उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्राज्ञिक बैठकले विश्वविद्यालयको नाम कान्जिरोवा राख्न प्रकृया अघि बढाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्तै अबको दुई वर्षमा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल एण्ड टूरिजम विषयको पढाइ सुरु गर्ने, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले प्रदान गर्ने भनेको स्वर्ण पदकको प्रस्तावलाई अनुमोदन, स्नातक तहमा दुई वर्षमा दुई सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य नेपाली विषयको अध्यापन सुरु गर्ने, स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता, लोकवार्ता, जनप्रशासन र स्नातक तहमा पुस्तकालय विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गर्ने र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार वितरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने लगायतका निर्णयहरू समेत बैठकले गरेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार खड्काले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले स्नातकोत्तर तहमा शारीरिक विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यस्तै विभिन्न संकायको पाठ्यक्रमा रहेका त्रुटीहरूलाई संशोधन गर्ने, विभिन्न विषयका कोड नम्बरहरू स्वीकृत, विभिन्न विषयका पाठ्यक्रमहरूको स्वीकृती गर्ने लगायतका निर्णयहरू समेत बैठकले गरेको छ । बैठकमा उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले विश्वविद्यालयको स्थायित्व र गुणस्तर वृद्धिका लागि आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रकाशित मितिः २५ चैत्र २०७२, बिहीबार ०७:०३